Qatar Airways oo xubin cusub ka noqotay ICAO Global Sustainable Aviation Coalition
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways oo xubin cusub ka noqotay ICAO Global Sustainable Aviation Coalition
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Isbahaysiga waxaa ka mid ah daneeyayaasha ka shaqeeya mowduucyo ballaaran oo la xiriira duulimaadyada waara, oo ay ku jiraan shidaalka duulista ee joogtada ah, kaabayaasha, hawlgallada, iyo teknolojiyadda, waxayna raadineysaa isbeddellada marka la aqoonsanayo xubnaha cusub ee imaan kara.
Qatar Airways ayaa ku dhawaaqday inay ka qaybgalayso Isbahaysiga Caalamiga ah ee Duulista Joogtada ah ee Ururka Duulista Rayidka ee Caalamiga ah.
Qatar Airways waxay mar kale xaqiijineysaa sida ay uga go’an tahay burburinta duulista hawada iyo kor u qaadista gaadiidka hawada ee waara.
ICAO Global Coalition for Sustainable Aviation waa madal ay daneeyayaashu ku hormarin karaan fikrado cusub.
Qatar Airways waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo kaqeybqaadashadeeda Isbahaysiga Caalamiga ah ee Duulista Joogtada ah ee Ururka Duulista Rayidka Caalamiga ah (ICAO), isagoo noqonaya diyaaraddii ugu horreysay ee Bariga Dhexe ku biirta isbahaysiga caalamiga ah, iyagoo xaqiijineysa sida ay uga go'an tahay inay si wadajir ah ula shaqeeyaan daneeyayaasha warshadaha ee ay quseyso. , sida soo-saarayaasha, tacliinta, dawladaha iyo ururada aan dawliga ahayn ee ku wajahan decarbonization-ka duulista iyo kor u qaadista gaadiidka hawada ee waara.
The ICAO Isbahaysiga Caalamiga ah wuxuu kor u qaadaa duulista caalamiga ah ee joogtada ah, isagoo u dhaqmaya sidii gole ay daneeyayaashu ku horumarin karaan fikrado cusub ayna dardargelin karaan xalal hal -abuur leh oo yareynaya qiiqa gaaska aqalka. Waxa kale oo ujeeddadeedu tahay in la siiyo talooyin ku aaddan horumarinta iyo hirgelinta dambiisha tallaabooyinka iyo sahaminta ujeedo deegaan oo muddo dheer la xiriirta duulimaadyada caalamiga ah.
Qatar Airways Madaxa Fulinta Kooxda, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waa hal -abuurnimo u horseedi doonta wershadaha mustaqbal waara. Waxaan si xoog leh u aaminsanahay in ICAO Isbahaysiga Caalamiga ah ee Duullimaadka Joogtada ah ayaa u oggolaan doona wada-hawlgalayaasha hoggaaminaya warshadaha inay daba-galaan abuurista iskaashi iyo inay hal-abuurka wada wadaan. Qatar Airways waxay sugeysaa inay noqoto iskaashi istiraatiiji ah oo ka tirsan isbahaysiga. Waxaan filaynaa inaan ka wada shaqeyno xubnaha kale sidii loo horumarin lahaa fikradaha iyo istiraatiijiyadaha si loo fududeeyo dardargelin dheeraad ah oo ku aaddan teknoolojiyadda cagaaran ee hal -abuurka leh, annaga oo tallaabo nooga sii qaadaya xagga qiiqa eber ee qiiqa ah. ”
Meelaha diiradda la saarayo waxaa ka mid ah, kor u qaadista wacyiga horumarka joogtada ah ee loo sameeyay dhinaca qaybta CO2 dhimista qiiqa hawada ee duulimaadyada caalamiga ah, iyada oo lagu saleynayo hoggaamiyeyaasha jira iyo horyaalnimada, iyo sidoo kale xoojinta iskaashiga hadda jira iyo hal -abuurka.
Qatar Airways waxay awoodi doontaa inay la wadaagto tallaabooyinkeedii hore iyo kuwa socda iyo dadaallada wax looga qabanayo CO2 qiiqa, oo siiya aragtiyo qiimo leh dhammaan daneeyayaasha, si ay gacan uga geystaan ​​shaqada ay hoggaaminayso ICAO. Isla mar ahaantaana, waxaan rajeyneynaa inaan ku dhiirrigelinno shuraakada kale ee warshadaha inay qaataan ka -qaybgal ku wajahan yoolalka isbeddelka cimilada ee aan wadaagno.